एकजना राम्रो जापानिज जानेको नेपालीसँग म र मेरी पत्नी एरिको हरेक आइतबार नेपाली सिक्छौं। केही प्रशंसा गर्न प्रयोग हुने शब्दहरु म भन्न सक्छु। तर, अंग्रेजीको एउटै अक्षर 'डि' नेपालीमा चार थरी अक्षरहरु (द, ध, ड र ढ) लाई जनाउन प्रयोग हुने रहेछ, यो सुन्दा म त चकित परेँ। अर्को कुरा, नेपालीमा आधा अक्षरहरु पनि हुने रहेछन् अनि अक्षरको खुट्टा पनि काटिँदो रहेछ ! कस्तो रमाइलो ! भाषा सिक्नुको अप्ठेरो र यसको काइदा थाहा पाउनुको मज्जाले मलाई एकै पटक गिजोल्न आउँछ।
यही मे महिनादेखि जापानमा नयाँ युग 'रेइवा' सुरु भएको छ, जसको अर्थ 'अनुपम सद्भाव' भन्ने हुन्छ, यो पनि अर्को सुखद अनुभव नै हो। पूर्वसम्राटले गद्दीत्यागपश्चात् वर्तमान सम्राट नारुहितोको गद्दीआरोहणसँगै उक्त नयाँ युगको थालनी भएको हो। काठमाडौंमा रहनुहुने थुप्रै नेपाली मित्रहरू तथा कूटनीतिक समुदायहरूले यस विशेष कार्यक्रमलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरिदिएकामा हामी आभारी छौं।
हाम्रो दूतावास नजिकै, लाजिम्पाटको एम्बेसेडर होटेलमा रहेको कोतेचु जापानी रेस्टुरेन्ट मेरो छनोटमा पर्ने ठाउँ हो। परम्परागत जापानी खाना 'वासोकु' लाई युनेस्कोले २०१३मा विश्व सांस्कृतिक सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। यसलाई हामी विश्वभरि नै प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्दछौं।
अवश्य पनि यहाँको अद्भूत प्रकृति, पहाड, इतिहास, संस्कृति र विशेषत: विश्व सम्पदा क्षेत्रहरू तथा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको मुलुक भनेर चिनिन्छ।
परम्परागतरुपमा हामीबीच राम्रो सम्बन्ध छ। नेपाली संस्कृति, हिमाल र लुम्बिनी जापानीले मन पराउँछन्।
सन् १९५६ मा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै विगत ६ दशकदेखि जापान र नेपाल असल साझेदारका रुपमा रहँदै आएका छन्। दुई मुलुकका विदेशमन्त्री बीचका भ्रमण आदान-प्रदान तथा 'निर्दिष्ट दक्ष कामदार' अवधारणापत्र जारी भएपश्चात् द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत भएको छ। यही जुलाइदेखि सुरु हुन लागेको नेपाल वायुसेवाको काठमाडौं ओसाका सिधा उडानको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु।
नेपालको एक अशल तथा सच्चा मित्रका नाताले 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' भन्ने नेपाली नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जापान हातमा हात मिलाएर आर्थिक, गुणस्तरीय र प्राविधिक सहायता तथा लगानी वृद्धि आदिबाट सहकार्य गर्न चाहन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “रोजगारीका लागि विदेशमा ४० लाख युवा भौतारिरहेका छन्, सरकार के हेरेर बसिरहेको छ भन्नेलाई सरकार समाधानको बाटो खोजेर अगाडि बढेको छ, यो कार्यक्रम त्यसैको एउटा नमुना हो।”
कुनै नेपाली सरकारी बेवास्तामा नपर्ने र बेरोजगार हुनु नपर्ने उनको दाबी थियो। 'हामी समृद्ध नेपाल बनाउन लागिपरेका छौं, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन युवा रोजगारलाई जोड्दैछौं,' उनले भने। यो महाअभियानको भव्य सुरुआत भएको बताउँदै उनले यो कुनै गोष्ठी नभई कामबाटै सुरु भएको अभियान भएको धारणा व्यक्त गरे।
ओलीले नेपालमा अब कोही भोकै पर्दैन र कोही भोकले नमर्ने बताए।
उनले सरकार ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउन लागिपरेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक प्रदेश, नगर र गाउँपालिकालाई डिजिटलमय बनाउने बताए। काम नपाएर अब कोही पनि नेपाली विदेशिनु नपर्ने बताउँदै उनले सबैलाई देशमै रोजगारी दिने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र निर्माणको महान अभियानको एउटा दृष्टान्तको रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको चर्चा गर्दै देशमा अब कोही पनि भोकै बस्नुपर्ने र भोकले मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए।
सरकारले बालकदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मको जीवन सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले अब कसैलाई समस्या नपर्ने बताउँदै उनले सरकारले सुरु गरेको महान् अभियानदेखि आत्तिएर केही प्रतिक्रियावादी तत्वहरु सक्रिय रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, “अब जनतालाई भ्रममा राखेर भड्काउने र अलमल्याउने दिन सकिएको छ।”
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कटुञ्जेको सवुर्ण चोकदेखि तीनधारा जाने सडक निर्माणको शुभारम्भ गर्दै कार्यक्रमसँग आबद्ध भएका युवालाई साबेललगायत उपकरण हस्तान्तरण गरेका थिए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’ ल्याएको बताउँदै चालू आर्थिक वर्षमा आंशिक रुपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि आगामी वर्षबाट कम्तीमा पाँच लाख बेरोजगार युवालाई व्यवस्थितरुपमा रोजगारी दिने गरी देशैभरि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। उनले शिक्षित र अशिक्षित दुवै वर्गका लागि सरकारले रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको बताए।
सूर्यविनायक नगरपालिका-५ सूवर्णचोकदेखि तीनधारासम्मको करिब तीन सय मिटर सडक निर्माण सुरू गरी कार्यक्रम थालनी गरिएको छ। जिल्लाका चारवटै नगरपालिकाले बेरोजगार युवाको नामावली संकलन गरेको छ। बेरोजगारको सूचीमा परेकाहरूलाई सामाजिक न्यायमा अग्रसर गर्ने र समन्वयात्मक किसिमले स्थानीय तहमै रोजगार प्रदान गर्ने मन्त्री विष्टले आश्वासन दिए।